को सबैभन्दाचम्किलो विद्युत स्केटबोर्ड पृथ्वीमा - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
हामी पनि लाग्यो-बारेमा श्रृंखला ड्राइभमा लागू तनाव राख्न सबैभन्दा राम्रो तरिका को एक। केवल यी सबै hoverboard तर बिजुली hoverboards जो उचित प्रमाणपत्र छ प्रयोग गर्न सुरक्षित छन् - यो सबै उच्चतम 10 भन्दा राम्रो hoverboards तल दिइएका समावेश छ। तिनीहरूले तैपनि विकास भइरहेका छन्। तपाईं फिटनेस बारेमा संलग्न छन्, यदि तपाईं साइकल पेडल र कम सहायताको मोड मा प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यहाँ मिनी Harleys, प्रहरी मोटरसाइकिल, र cruisers छन्। हामी त्यहाँ महसुस यी छोटो यात्राको ह्यान्डल गर्न एक राम्रो तरिका हुन भएको थियो। पछि, सायद, तपाईं राम्रो वास्तवमा मामलाहरु के सिक्न थियो। चाहे तपाईं बस बन्द-सडक माटो बाहिर एक सर्फ परीक्षण लागि समुद्र तटीय, टाउको गर्न यात्रा, वा मा छिमेकी वरिपरि onerous-तल्ला वेग स्टाइल संग राख्न, त्यहाँ एक हो Koowheel विद्युत स्केटबोर्ड तपाईं पूर्ण मिलान, र आफ्नो शैली। धेरै Futuristic अवधारणाहरु समझदार हुन पनि farfetched देखा, तर यो बिजुली स्केटबोर्ड वास्तवमा काम गर्दछ र रमाइलो र उपयोगी दुवै हुन बाहिर गरियो।
यो धेरै सुन्दर, प्रभावकारी-निर्माण गर्नुपर्छ र रमाइलो धेरै, सुन्दर ठीक-निर्माण र आनन्द अनुभव गर्न अनुभव गर्न! तपाईं आफ्नो शहर मा प्रत्येक कुना यसलाई चल्न सक्छ। तपाईं संभवतः तपाईं केवल अगाडि वा पछाडि दुबला गर्न आवश्यक हुन सक्छ सजिलो विज्ञापन संग कुनामा को माध्यम द्वारा अगाडि जान वा उल्टाउन सक्षम छन् भनेर बहाव गर्न सक्छन्। त्यहाँ bellow रूपमा धेरै सुविधाहरू छन्:
1 उच्च playability संग सही छोटो यात्रा उपकरण।
2., हल्का, सघन, पोर्टेबल, सरल।
3. सस्ता अझै टिकाउ।
को Powerboard स्व सन्तुलन स्कूटर सबैको लागि हो। यो वास्तवमा एकदम बिट पूर्ण मानक 'hoverboard' आत्म सन्तुलन स्कूटर हामीले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न छ! को professionalrider को पछिल्लो टायर धूम्रपान हेर्ने, उहाँले स्कूटर मा छ कल्पना गर्न laborious छ।
यसलाई लिन संग, ब्रेक, शिखर, भण्डारण आवश्यकताहरु, र वारंटी व्यवहार, आफ्नो अधिकतम वेग, ब्याट्री जीवन को पालन गर्न महत्त्वपूर्ण। हुन सक्छ कि कुनै अचानक रोक्छ खतरनाक अगाडि hurtling। तपाईं बिजुली स्कूटर विचार गर्दा, skateboards रेकर्ड मा छैन पहिलो सम्भवत छन्। यो अर्को छ दुई पाङ्ग्रा बिजुली आत्म सन्तुलित स्कूटर .तपाईं पनि यो अझै पनि खडा गर्न सक्छन् र पनि एक स्थान मा 360 डिग्री फ्लिप गर्नुहोस्। दुई पाङ्ग्रा र दुई इन्जिन वेग र स्थिरता लागि उपयोगी छन्। यो बनाउन एक महत्वपूर्ण विचार छ मामला मा तपाईं एक वजन वा मोटे विशेष व्यक्ति हुन्।